गजल गायनमा जग बसालेका गायक	::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
१सररर विद्युतीय बस चढेर प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबारसम्म, भने : अब घरघरमा विद्युतीय चुल्हो !
२केशव स्थापितलाई सञ्चारकर्मीले लगाइन् यौन दुर्व्यवहारको आरोप
३स्मार्ट लाइसेन्स : आजदेखि निजी कम्पनीले दैनिक २० हजार कार्ड छाप्ने
४अस्ट्रेलियाको बिग बास क्रिकेट लिग खेल्दै सन्दीप, पारिश्रमिक ६० हजार डलर
५यसरी छुटाउनुस् रक्सीको ह्याङओभर !
६अरुणखोला दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो, २० जनाकाे अझै उपचार
७पिसाब पिउनु साँच्चै नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो ? जान्नुहोस् !
गजल गायनमा जग बसालेका गायक
सोलुखुम्बुको तिङ्लामा जन्मिएका हुन् अहिलेका चर्चित गायक आनन्द कार्की । कार्की बस्ती भएको सो गाउँमा उनले कक्षा दुईसम्म पढे । बुबा ईण्डियन आर्मीमा भर्ति भएपछि सपरिवार उतै लागे उनी । सात परिवारका उनी कान्छा हुन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि भएका उनले लखनउको जनता स्कुलबाट एसएलसी सके । एसएलसीपछि उनी डिएभी हाईस्कुलमा पढ्न थाले, त्यहाँ पढ्दा उनले एउटा गीतका लागि समुह नै बनाए र संगीतको औपचारिक शिक्षा पनि लिए ।
उनी १४ वर्षको हुँदा उनका बुबाको निधन भयो । संगितमा रुचि भएका उनलाई उनका ठूलो दाई भूपाल सिं कार्कीले रुचि अनुसारकै काम गर्नका लागि सहयोग गरे । ठूल्दाई खेलकुदमा हकीका राम्रा खेलाडीभित्र पर्थे । हाईस्कुल पढ्दा पनि विभिन्न कार्यक्रमका लागि नेपाल आईरहन्थे उनी । कलेज पढ्दै गर्दा उनले आर्केष्ट्रा पनि तयार गरिसकेका थिए, त्यो समुहमा उनी गायक थिए । त्यतिबेला उनका माहिला दाई नेपाल प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि नेपाल आएका थिए, तर विभिन्न कारणले उनी भर्ति हुन त सकेनन् तर पनि नेपाल छोड्न चाहेनन् । दाईको नेपाल बसाईले नै उनलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न र काठमाडौंको बसाईलाई सहज बनाईदियो । उनका भतिज लगायत आफन्तहरु काठमाडौंमै बस्थे त्यतिबेला ।
२०४० सालमा लायन्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा २० दिनका लागि काठमाडौं आएका उनले कार्यक्रमको सबैतिरबाट अफर आउन थालेपछि एक महिना बिताए, उनको आर्केष्ट्राको टीमका साथीहरु फर्किए तर उनलाई फर्कन मन लागेन । उनी भन्छन्–‘हिन्दी गीतको माग नेपाल बढेको अवस्था थियो, त्यसैले मेरो बसाई लम्बियो ।’ बागबजारमा उनले चिनेको एउटा साथीको बसेरा नामको रेष्टुरण्ट थियो । उनका ती साथीले त्यहाँ शुक्रबारका दिन गजल सुनाउने योजना उनलाई सुनाए । उनले त्यहाँ साथीहरु जुटाए, जसमा न्ह्यु बज्राचार्य, सुरेन्द्र लगायतका थिए । उनको संघर्षको कथा यसैगरि सुरु भयो, जहाँ उनले एकपटक गाएको ७५ रुपैयाँ पाउँथे ।
२०४२ सालमा उनले रेडियो नेपालबाट स्वर परिक्षा पनि पास गरे । जीवनको पहिलो गीत उनले ‘जीवनमा धेरै खोला तर्नुछ…’ आफ्नै स्वरमा रेकर्ड गराए । त्यसपछि उनले एभरेष्ट सेराटन होटल (अहिलेको एभरेष्ट होटल) मा गाउन थाले । त्योबेला सेराटन होटल चर्चित र महँगो पनि मानिन्थ्यो । उनी गजल गाउने भएकाले उनको माग पनि बढ्दै जान थाल्यो । जहाँबाट उनले नाम र दाम दुवै कमाए । २०४३ सालमा उनले आनन्द कार्कीका गजलहरु भनेर एकल एल्बम निकाले, हालसम्म उनले १४ ओटा एल्बम निकाली सकेका छन् । सारेगम अन्ताक्षरीमा पनि गाउन पुगेर प्रथम भएका उनले चलचित्र, गजल, भजन, आधुनिक गरि हजारौं गीत गाईसकेका छन् ।
दरवारमा पनि गीत गाउँथे उनी त्यतिबेला । संघर्ष गर्दै स्थापित गायकको पहिचान बनाईसकेका उनले गोरखा दक्षिणबाहु, त्रिशक्ति पट्ट, छिन्नलता दुई पटक लगायतका पुरस्कारहरुबाट पनि सम्मानित भए । संगीतमै लागेका उनी हिन्दी गीत राम्ररी गाउन सक्ने नेपाली गायक हुन् ।
सेराटनमा जागिर गर्दा उनले पारिश्रमिक बढेर झण्डै पाँच हजार पुग्यो । जवकी उनी बागबजारको रेष्टुरेण्टमा गाउँदा ७५ रुपैयाँ पाउँथे । यसरी उनले आर्थिक रुपमा समेत राम्रै सफलता पाए । त्यो बेला गरेको कमाईले उनी भारतको मुम्बईमा बसेर उतै प्लेब्याक सिंगर बन्ने धुनमा लागेका थिए । तर यताको उनको प्रेमले उतै बस्न जान भने दिएन । कार्की भन्छन्–‘छोेड्न पनि सकिएन, कुरेर बस भनौं केटालाई कुर्ने भन्ने ठेगान पनि भएन ।’ संसारको म्युजिक ईन्डस्ट्रिजमा नाम कमाउने ध्याउन्नमा लागेका उनले मुम्बईमा बसेर बलिउडमा ईन्ट्री मार्ने सपना देखेका थिए, तर पूरा हुन भने सकेन । सँगै काम गर्ने ईश्वरी राना क्षेत्रीसँगको मायामा परेका उनले २०४६ सालमा उनैसँग बिहे गरे । पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएपछि उनकी आमा पनि नेपाल आईन् । आमाले जोरीपारीको अगाडि पो प्रगति देखाउने हो भनेपछि उनको मुम्बई मोह बिस्तारै हराउँदै जान थाल्यो । उनलाई रेडियो नेपालमा जाँदा पनि यो भारततिरै जान्छ भन्थे केहिले तर उनलाई त्यस्तो लाग्दैनथ्यो ।
नेपाली संगीत क्षेत्रमा गजल गायनको जग बसालेको श्रेय उनैलाई जान्छ । २० भन्दा बढी देशहरुमा आफ्नो प्रस्तुती दिईसकेका कार्कीका प्रशंसकहरु पनि प्रशस्तै छन् । उनी पछिल्लो पल्ट एउटा प्रशंसकले दिएको उपहारलाई अनौठो मान्छन् । केहि सयमअघि भक्तपुरको एक कार्यक्रमा पुगेका उनलाई एकजना फ्यानले नम्बर माँगे । उनको फ्यान बताउने उनले आफ्नो फर्निचरबाट उपहार दिन चाहेको बताए, उनलाई विश्वास त लागेको थिएन तर दैनिक फोन आउन थालेपछि उनलाई ती फ्यानले आफ्नो शोरुममा बोलाए । उनी त्यहाँ पुगेर करिब डेढ लाखको डाईनिङ टेबल लिए उनले तर ती फ्यानले पैसा लिन मानेनन् ।
उनीसँग यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् । संघर्षको यात्रा पनि लामै छ । जहाँबाट उनले आफ्नो संघर्ष र करियर अगाडि बढाए, त्यहि सेराटन (हालको एभरेष्ट होटल) मा उनका छोरा आफ्नो करियर अगाडि बढाईरहेका छन् आफ्नै मेहेनतमा ।